Onyeọbịa Projects | Outboard Boat Motor Mmezi
Nke a bụ ebe ị nwere ike bulite foto ma hapụ ihe na-agwa anyị gbasara oru gị. Ọrụ ndị agadi na saịtị ochie Ebe a.
osụk site Andypontinen na òtù ezinụlọ, 09 / 06 / 2017 - 04: 56
Nsogbu longshaft Evinrude 3hp 3303S
Enwere m '63 Evinrude 3hp, version longshaft. Emere m ihe zuru ezu na ya ruo afọ abụọ gara aga, ma anaghị m mepee powerhead (akụkụ crankshaft) N'oge okpomọkụ a mgbe m na-agba ụgbọ mmiri, ihe na-agbaji na mberede na-agbaji n'etiti mwepụ na crankshaft. Igwe uhie na-emegharịghị aka (na propeller) ọzọ. Akụkụ ala nke ụgbọala ahụ dị mma. Mgbe m na-ekpuchi ọkụ na-atụgharị ma tụgharịa, m ga-ahụ na ọ kpaliri pistons ahụ na mbadamba dịka o kwesịrị. Ọ nwere ike ịbụ njikọ ejikọta aka na-agbagha agbaji n'ụzọ ụfọdụ? Isi mmalite nke Driveshaft (aka powerhead) bụ ihe dị ịtụnanya - n'akụkụ ọnụ ụzọ, nke dị nnọọ iche karịa '65 Johnson 3 hp, nke nwere isi kpakpando (kpakpando) dị na ya.
osụk site ttravis on Tọs, 09 / 14 / 2017 - 11: 49
Na zaghachi Nsogbu longshaft Evinrude 3hp 3303S by Andypontinen
M ga-agba mbọ iji ...
M ga-agba mbọ wepụ obere ala ma malite igwe iji hụ ma ọ ga-agba ọsọ. Ọ bụrụ na enweghi nsogbu na powerhead, ị nwere ike ị ga-aga site na gọọmentị ahụ. Kedu ihe mmanụ ala dị ala dị ka? O nwere ike ịbụ na akàrà ahụ dị njọ, ị na-enwetakwa mmiri n'ime ogwe gị nke nwere ike ịchọta ha mgbe ị nụsịrị oge. Ị nwere ike ịzụ ahịa eBay iji hụ ma ị nwere ike ịnweta akụkụ dị mma ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala otu nwere ezigbo ala nke ị nwere ike ịzụ ahịa. A na-agbanwe akụkụ dị iche iche, ma ị ga-ahụ ngwa ngwa ịchọtara onwe gị n'ụzọ karịa gị. Buru ụzọ gbalịa wepu ya niile ma kpochapụ ihe niile ma weghachite ya na akàrà ọhụrụ.
osụk site ricklummer on Tus, 04 / 24 / 2018 - 09: 07
Ennt nwere ebe a na-akpọ ya
osụk site egwuregwu Na Sun, 09 / 10 / 2017 - 13: 31
Evinrude 25 hp Big Twin (Model 25018) Ọ dịghị Malite / Ejiri Ebube
Nke mbụ, ka m malite site n'ịkele gị maka ịmalite na ịnọgide na-enwe nnukwu ebe nrụọrụ weebụ a!
Enwetara m engine ahụ n'oge na-adịbeghị anya. Ekwuru na emegharịrị nke ọma mgbe ọ na-agba ọsọ.
Otú ọ dị, mgbe ị gbalịsịrị ịmalite ya n'enweghị ihe ịga nke ọma, ma na-enyocha m, enwere m obi abụọ. Ihe a na-ekwu, m nyochara maka ikpuchi ma kwenye na. Otú ọ dị, achọpụtara m mmanụ ụgbọala na-adọkpụ na-adọba ụgbọala site na nnukwu agịga na-agba ọsọ. Ọzọkwa, nza nke mmanụ na mpaghara ọnya akpịrị.
M na-agbasapụ ụgbụgbọ ahụ, ma chọpụta na mbempe mmiri ahụ adịghị. Ugbo ahụ bụ akpụkpọ ụkwụ ochie. Ana m eche na ọ dịkarịa ala ụfọdụ n'ime nsogbu m na-amaliteghị na-akpata site na idei mmiri n'ihi nnukwu valvụ ụgbọ mmiri na-adịghị emechi nke ọma, ma ọ bụ n'ihi ebe ọjọọ ma ọ bụ ruru unyi, na / ma ọ bụ na-ezighị ezi.
Ya mere, ana m enye iwu ka a na-agba chaa chaa na ọwa ọhụrụ. Lee ajụjụ m:
1) Ozi kachasị mma m nwere ike ịchọta na nhazi mmiri bụ: ọ bụghị karịa 1 / 32 "site na ọkwa dị elu nke carb body. 1 1 / 4" na-ese n'elu. Nke a ọ ziri ezi?
2) Enwetara m ọtụtụ ihe na nkwụnye ihe nkwụ. Enwere ike ịchọta ihe ahụ dị njọ, si otú ahụ nye ụtụ aka n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ? Kedu ihe idozi maka ọhụụ ọhụrụ ma ọ bụ ntọala?
osụk site ttravis on Tọs, 09 / 14 / 2017 - 11: 55
Na zaghachi Evinrude 25 hp Big Twin (Model 25018) Ọ dịghị Malite / Ejiri Ebube by egwuregwu
Mgbe m na-ese n'elu ...
Naanị mgbe m na-ese n'elu ya ka ọ dị larịị. N'elu larịị, agịga ahụ kwesịrị ịkwụsị mmanụ ọkụ n'ime mmanụ. Anaghị m atụ ihe ọ bụla.
Ngwongwo agba nke ọhụrụ ahụ ga-agụnye ngwongwo mkpị ụkwụ nke a ga-arụnye. Kaadị gị ekwesịghị igwu ala mgbe ị na-atụgharị nke ga-abụ ihe ize ndụ.
osụk site egwuregwu on Fraị, 09 / 15 / 2017 - 16: 03
Na zaghachi Mgbe m na-ese n'elu ... by ttravis
ok, ekele maka nzaghachi ...
ok, ekele maka nzaghachi. Ihe mpempe akwụkwọ ndị m nọ na-ele anya anaghị agụnye mbido ngwugwu.
Echere m na m nọ na egwu ahụ ruo nsogbu 'mmalite'.
osụk site ttravis on Fraị, 09 / 15 / 2017 - 23: 57
Na zaghachi ok, ekele maka nzaghachi ... by egwuregwu
Nke a bụ ụfọdụ nnọchi ...
Nke a bụ ụfọdụ nnọchi mgbochi: https://www.amazon.com/s/ref=as_at?imprToken=SkxdL8dTeRyLD5isJEtUSQ&slo…
osụk site Mike L on Nọdụ, 04 / 21 / 2018 - 19: 56
Na-aga na-agbalị aka m na iweghachite lightwin nna m, na-achọ ịbụ 54 si agba. Mbụ oge na nke a. E nyere iwu maka akụkụ niile ị tụrụ aro ka ị na-emegharị (na-arụ ọrụ ụgbọ ala, plọg, isi ihe, condenser, mgbanaka, elepụ anya.) Echere m na m ga-eji dochie akara ala dị ala, dịka engine ahụ adịghị agba ọsọ na 25 afọ. Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ị ga - eme, ị ga - achọpụta ihe ị ga - eme.
osụk site Starfish229 na Solomon, 08 / 27 / 2018 - 12: 57
Egwuregwu Scott 1962 agaghị amalite
Naanị m nwetara ụgbọ mmiri ezinụlọ nke na-anọghị na mmiri maka 25 afọ m nwetara ya ozugbo ọ na-agba ịnyịnya ugbu a ọ gaghị agbanye. Ọ ga-amalite site na iji amalite mmiri kama moto agaghị anọgide na-agba ọsọ.
azụrụ m akwụkwọ ntuziaka maka moto 1962 Scott ma chọọ ndụmọdụ ụfọdụ m kwesịrị ime ọzọ.
m na-agbanwe ọwa ọkụ ọkụ na batrị ọhụrụ m na-alụ ọgụ maka ihe m kwesịrị ịnwale ọzọ.
ndụmọdụ ọ bụla ma ọ bụ ka m ga-ewega ya ebe ị ga-agbapụ?
Osimiri Runt chọrọ TLC
osụk site ttravis Na Sun, 10 / 28 / 2018 - 22: 48
5.5 HP Johnson 1960 Ihe Nlereanya CD-17 nke Bosse "Bo" Petersson
Naanị agbakwunyere / esite na facebook saịtị gaa na Ngalaba NchNhr.
5.5 HP Johnson 1960 Ihe ngosi CD-17 Project site Bosse "Bo" Petersson - Stockholm, Sweden
osụk site boatman350 na òtù ezinụlọ, 01 / 23 / 2019 - 10: 36
Ezigbo onye ọ bụla chọrọ ịjụ mmadụ niile banyere oru gị na 2019 na otú ha si ekele ekele onye ọ bụla nwere afọ ojuju
osụk site Lewis Walling on Tọs, 03 / 14 / 2019 - 18: 03
Mgbanwe maka usoro mmanụ ọkụ abụọ na usoro ntanetị
Enwere m 10 hp 1957 Johnson Seahorse na usoro ọnụọgụ abụọ. Achọrọ m ịtụgharị ya na usoro usoro. Kedu akụkụ dị m mkpa karịa ihe ọkụkụ mmanụ? Ọ bụrụ na m chọrọ carburetor, gịnị bụ nomenclature maka akụkụ a?